> Resource > iPhone > iPhone Manager Music: Dhoofinta / Import / Delete Music on iPhone
Lugood waxaa si balaadhan looga isticmaalaa si ay u maareeyaan music on iPhone. Burcad Lugood iyo music u hagaagsan in iPhone. Waxay u egtahay fudud. Laakiin, dhab ahaantii? Mar kasta oo aad isticmaasho Lugood si hagaagsan music, faylasha hore music aad iPhone baabi'i doontaa. Ka sokow, haddii aad rabto in aad ka iPhone wareejiyo music in Lugood, aad leedahay si aad u hesho hab kale. Maxaa dhacaya haddii aad laga badiyay maktabadda Lugood iyo dhammaan faylasha music waxa kaliya ee ku xayiran on your iPhone?
Xaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa ah music kala iibsiga iPhone - Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) (isticmaalayaasha Mac). Waxa keliya ma aha kuu ogolaanaysaa inaad music ka PC wareejiyo iPhone, laakiin dhoofisa music iPhone in Lugood iyo PC. Marka files music keeno leeyihiin qaabab leheyn, barnaamijkan kaa caawin doona inaad iyaga badalo kuwo saaxiibtinimo iPhone.
Fiiro gaar ah: Halkan, waxaan isku dayi doonaa version Windows. The version Mac sidoo kale ka shaqeeya.
Step1. Connect iPhone in computer ka dib markii socda MobileGo
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan MobileGo on your computer. Barnaamijkan waxa si buuxda u la jaan qaada kombiyuutarka ku salaysan Windows 8/7 / Vista / XP. Connect aad iPhone in kombiyuutarka via cable USB ah. Markaas, barnaamijkan isla ogaado doonaa iPhone.
. Step2 Tababaraha music iPhone: dari / dhoofinta / saarto music iPhone
Guji "Media" geedka buugga bidix. Guji "Music" inay soo qaadaan suuqa kala maamulka music ah.
Si aad ku dari music aad iPhone, guji saddexagalka "Add"> "Add File" ama "Add Folder" hoos. Dooro files music ama folder music in aad rabto in aad soo dhoofsadaan. Markaasuu iyaga (u) dajiyaan.
Si aad ku dari playlists, guji "playlist" khaanadda tagay. Daaqadda playlist, riix saddexagalka "Add" hoos. Dooro "Add Lugood Playlists" ama "Add playlists ka Computer".
Intaa waxaa dheer, tababaraha music this iPhone awood aad u dhoofiso music in Lugood iyo computer si fudud. Ugu khadka hoose ee suuqa hoose, guji "Dhoofinta Music in computer". Markaas dhammaan faylasha music aad iPhone dhoofin doonaa si aad u computer. By gujinaya "Dhoofinta Music inay Lugood", waxaad ku dhajisan karo files music in labada on your iPhone iyo Lugood, oo kaliya u gudbiyaan kuwa aan ahayn in Lugood.
Ama, waxaad tahay inay awoodaan inay u dhoofiyaan music si aad u computer ama Lugood furmo maamulka music ah. Dooro files music doonayo aad. Guji "Dhoofinta in". Dul meeshii aad rabto in aad badbaadin music laga dhoofiyey. Si aad u dhoofiyaan music in Lugood, guji saddexagalka hoos "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in Lugood Library". Markaas, dhammaan faylasha music waxaa loo wareejin doonaa Lugood. Ama, waxaad riixi kartaa "Smart dhoofinta in Lugood". Sidoo kale, kaliya aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan files music in aad Lugood ma laha.
Haddii aadan rabin in ay sii music qaar ka mid ah wax ka badan gudbiyo, tababaraha music this u iPhone gelineya inaad iyaga oo dhan hal mar soo saarto. Files music Dooro in aad go'aansato in aad ka saarto. Guji "Delete"> "Haa".